Maxaad ka taqaan faracyada Al-Qaacida ee daafaha dunida ? (Warbixin + Sawiro) – SBC
Maxaad ka taqaan faracyada Al-Qaacida ee daafaha dunida ? (Warbixin + Sawiro)
Ururka Al-Qaacida ee uu aasaasay hogaamiyahoodii la diley Osama Bin Ladin waxaa dhidibada loo taagey sanadkii 1993-kii waxyaabaha ugu waa weyn ee loo unkay waxaa ugu waa weynaa la dagaalanka Mareykanka & xulufadiisa iyadoo mabaadiida kooxdaasi lagu sheegay in laga saaro Mulsimiinta dunida oo sida ay sheegeen la duleystey.
Al-Qaacida mudadii ay kula jirtey dagaalka Mareykanka xulufadiisa waxaa kordhay kooxaha fikirkoodu uu ka daadagay iyadoo ururkaasi oo xaruntiisu aheyd wadanka Afgaanistaan mudo sanooyin ah hada uu leeyahay faracyo kala duwan.
Hadaba waxaan ku eegaynaa warbixintan qaybaha ama faracyada kooxdan ee ku kala firirsan daafaha dunida kuwaasi oo leh hal fikrad oo ay ku mideysan yihiin.
* Al-Qaacidada Gacanta Carabata – AL QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
Kooxdan waxaa faraca Al-Qaacida ee wadamada Yemen & Sacuudiga waxay soo shaacbaxdey sanadkii 2009-kii , xarunteedu waa wadanka Yemen, waxaa lagu dhawaaqay kooxdan 3 sano ka hor markii Sacuudigu uu araxda ka jabiyey Al-Qaacidada dalkaasi ka jirrtey.
Kooxdan AQAP faraceeda Yemen waxaa hogaamiya Nasser al-Wahayshi, kaasi oo goor sii horeysay ka mid ahaa ragga aad ugu dhaw Osama Bin Ladin.
Wasiirka arimaha dibada Yemen oo ka hadlayey kooxdan awoodeeda wuxuu sheegay in uu rumaysan yahay in 300 boqol oo maleeshiyo ah oo kooxdan ka tirsan ay ku sugan yihiin dalka Yemen
Sanad ka hor weerarkii Sept. 11, 2001 Al-Qaacida waxay qarxisay markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabi jirey USS Cole, xiligaasi oo ahaa October 2000 wuxuu markabku ku xirnaa dekada magaalada Cadan, waxaana ku dhintey 17 ka tirsan ciidamada badda Mareykanka.
Kooxdan AQAP ama Al-Qaacida Gacanka Carabta waxay sheegteen masuuliyada weeraro dhicisoobay oo waxyaabaha qarxa lagu dhex qariyey diyaarad Mareykanku leeyahay 25-kii December 2009-kii weerarkaasi oo loo qabtey Umar Farouk Abdulmutallab oo ahaa nin dhalinyaro ah u dhashay Nayjeeriya oo la sheegay in uu tagey Yemen uuna ku biiray kooxdaasi.
Kooxdan AQAP waxay kaloo weeraro ka geysatey gudaha wadanka Yemen sanadkii 2010-kii, waxaa ka mid ahaa weerar ismiidaamin ah oo bishii April 2010 lala beegsadey safiirkia British-ka ee wadanka Yemen oo weerarkaasi ka badbaadey.
Sidoo kale kooxdan waxay sheegatey masuuliyada sidoo kale isku daygii qaraxyo ee loo adeegsan lahaa alaabo Posto ahaan looga soo diray wadanka Yemen bishii October sanadkii 2010, alaabtaasi Poostooyinka oo la saarey diyaarado u kala socdey Dubai & Britain.
Bishii November ee sanadkii hore kooxdu waxay ku hanjabtey inay geysaan doonaan weeraro ay ku ekeyn doonaan wax soo saarka Mareykanka iyagoo sheegay in reer Galbeedka ay kaga bixi doonto balaayiin doolar ilaalinta ama ka hor taga weeraradooda.
* Al-Qaacidada Maqribta Islaamiga ah- AL QAEDA IN THE ISLAMIC MAGHREB (AQIM)
Kooxdan waxaa hogaamiyaha hogaamiye maleeshiyo oo u dhashay nin u dhashay wadanka Al-Jeeriya oo lagu magacaabo Abdelmalek Droukdel, kooxdan waxay si buuxda u soo shaac baxdey ama soo fuushay masraxa bishii January ee sanadkii 2007-dii, waxaana kooxdan la rumaysan yahay inay ka soo farcameen dagaalyahanadii kooxdii reer Aljeeriya ee Salafiyiinta dagaalka & wacdiga ee loo aqoon jirey Algeria’s Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC). Kooxda Salafists waxay dagaal kula jirtey mudo ciidamada dawlada Al-Jeeriya laakiin sanadkii 2006-dii waxaa ka daadagay fikradaha Jihaadka ee Al-Qaacida iyagoo isbahasi la noqdey. Kooxda AQIM waxay geysteen weeraro qorsheysan oo aad u tayo sareeyey oo ay la beegsadeen ciidamada dawlada Al-Jeeriya iyagoo sidoo kale weeraray xafiiska qaramada Midoobey ee magaalada Al-Jaris sanadkii 2007-dii.
Kooxaha sirdoonka waxay aaminsan yihiin in kooxdan ay ka kooban yihiin dhawr boqol oo maleeshiyo kuwaasi oo ka dagaalama dhulka kaymaha jiqda ah ee waqooyiga bari ee dalka Mauritania, Mali & Niger, waxay kaloo ku guuleysteen inay afduubaan dad u dhashay wadamada reer Galbeedka kuwaasi oo qaarkood ay ka qaateen lacag madaxfurasho ah oo aad u fara abdan.
Dagaalyahanka AQIM waxay sheegeen masuuliyada afduub ee laba nin oo u dhalatey dalka Faransiiska kuwaasi oo markii dambe laga helay meydkooda dalka Niger ka dib markii uu fashilmay hawlgal lagu doonayey in lagu soo furto bishii September ee sanadkii 2010, waxaana cajalad muuqaal ah oo kooxdan baahisay ay ku soo bandhigeen labada nin ee la haystayaasha ahaa.
* Al-Qaacidada Ciraaq-AL QAEDA IN IRAQ (AQI):
Kooxdan waxaa la aasaasay bishii October sanadkii 2004-tii xiiligaasi oo hogaamiye maleeshiyo oo u dhashay dalka Jordan oo lagu magacaabi jirey Abu Musab al-Zarqawi uu balan ku qaaday in uu daacadnimo ula shaqeynayo Osama Bin Ladin.
Ayyab al-Masri oo u dhashay dalka Masar ayaa sanadkii 2006-dii wuxuu la wareegay hogaaminta kooxdaasi Al-Qaacidada Ciraaq dib markii la dilay Zarqawi.
Bishii October sanadkii 2006-dii kooxdan oo ay hogaamiyaan golaha Shuurada Al-Mujaahidiin ( Mujahideen Shura Council) waxay ku dhawaaqeen inay dalka Ciraaq ka dhiseen dawlada Islaamiga ah ee Ciraaq taasi oo ay kula midoobeen koox maleeshiyo Suniyiin ah oo uu hogaamiyo Abu Omar al-Baghdadi.
Bishii April 2007-dii aya dawladaasi ku dhawaaqeen taasi oo ka kooban gole xukuumadeed oo 10 nin ka kooban iyadoo Ayyab al-Masri laga dhigay wasiirka dagaalka.
Kooxdan waxaa ku biirey dagaalyahano ajanabi ah oo mutadiwiciin ahaan uga qyab qaadanayey dafaalka Al-Qaacida ee ka dhanka ah dawlada Ciraaq ee Mareykanku taageero, inkastoo kooxdaasi ay hada wiiqantay awood ahaan hadana waxay wali wadaan weerarada ismiidaaminta ah ee is qarxinta.
Weerar culus oo dhimasho badan geystey oo loo adeegsadey baabuur laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa oo ka dhacay wasaarada maaliyada, maxkamad, xarun lagu tababaro garsoorayaasha & bar koontrol oo ku yaal koonfurta Baqdaad ayey kooxdani sheegatey.
Weerarkaasi oo 8-dii December 2009-kii waxaa ku dhintey 112 qof waxaana ku dhaawacmey boqolaal qof.
18-kii April sanadkii 2010-kii Abu Ayyub al-Masri iyo Abu Omar al-Baghdadi ayaa waxaa lagu diley weerar ka dhacay baadiyaha waqooyiga Galbeed ee magaalada Baqdaad weerarkaasi oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada Mareykanka & kuwa Ciraaq.
Bil ka dib markii la diley Abu Ayyub al-Masri iyo Abu Omar al-Baghdadi oo aheyd bishii May 2010-kii Kooxdu waxay sheegtey in golaha sare ee dawlada Islaamiga ah ee Ciraaq waxay u doortey madaxda kooxdaasi Abu Baker al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi, halka Abu Abdullah al-Hassani al-Qurashi isna loo doortey kuxigeenkiisa ahna wasiirka kuwaad kuwaasi oo badalaya boosaskii l-Baghdadi and al-Masri ay ka geeriyoodeen.
Bishii October sanadkii 2010-kii koox hubaysan oo lagu xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Al-Qaacidada Ciraaq ayaa la haysteyaal u qabsadey 100 qof oo u ahaa Kirishtaanka Ciraaq, kuwaasi oo Kaniisad ku jirey isla markaana wax loogu yeeray cibaadeysi ku jirey.
52 qof oo isagu jirey Booliis & dadkii la haystayaasha ahaa ayaa ku dhintey hawlgal la isku dayey in xoog loogu soo furto dadkaasi.
mowliidsons@gmail.comSource: Qaybo ka mid ah warbixinta & sawirada Reuters & Janes’s World Insurgency and Terrorism,
waxaan u arkaa nimaankaa mu jaahidiin ku taagan jidka xaqa ah wana jidka ay muslimiintu manta ay ku badbaadi karaan manta dunidan lajoogo usaama wuxuu ahaa mu jaahid gaalo neceeba ah waxa uuna ku dhintay si geesi nimo ah waana sida mudan ku dayashada
maashaa allah waxay qabteen hawl aan kaseexanay